Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Wadamada Khaliijka oo Aysan Natiijo Wanaagsani Kasoo Bixin.
Shirkii Wadamada Khaliijka oo Aysan Natiijo Wanaagsani Kasoo Bixin.
Posted by ONA Admin	/ December 6, 2017
Shirka ururka dalalka Iskaashiga Khaliijka ee GCC oo shalay ka furmayey magaalada Kuwait ee dalka Kuwait ayaa la qorsheeyey in uu socdo labo maalin, balse qadar yar kadib furitaankii shirka ayaa la sheegay in lasoo afjari kadib markii ay kasoo qayb gali waayeen Madaxda Sare ee dalalka Xulafada Sacuudiga.
Dowlada Sacuudiga ayaa shirkan usoo dirtay Wasiirkeeda Arrimaha Dibada oo aan kamid ahayn Qoyska Boqortooyada, waxaa horay loo filayay in uu yimaado Boqor Salman. Halka dalalka Baxrayn iyo Isku-Taga Imaaraadka Carabta ay soo direen wufuud heer hoose ah.
Dhinaca kale dowlada Imaaraadka ayaa shalay shaaca ka qaaday in UAE iyo Sacuudiga wada dhisanayaan urur iskaashi oo u gaar ah oo ka shaqayn doona arrimaha militariga, siyaasada iyo ganacsiga. Ururkan cusub oo laga garab sameeyey kii horey u jiray ee GCC.
Arrintan ayaa dhaawac weyn ku ah Amiirka dalka Kuwait Sabah Al-axmad oo rajaynayey in ay yimaadaan Boqorrada Khaliijka ee shirka uu ku casuumay, isagoo horey balan qaad ka haystay dowladahaasi.
Amiirka Qatar Tamim Bin Hamad iyo wafdi balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa iyagu wax yar kahor ka dagay magaalada Kuwait si ay shirkaasi uga qayb galaan. Shirkan ayaa ah midka sanadlaha ah ee GCC waana kii ugu horeeyay oo dhaca tan iyo xiisada Khaliijka markii ay bilaabatay oo ay dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadku hogaamiyaan xayiraada kusoo rogeen dalka Qatar.